Oktobha 2016 - Nelžu.cz
I-Archive yenyanga: Oktobha 2016
Isitya seSkull kunye ne-Sklik kunzima kumfazi-3 x "iphutha elibulalayo" kwinyanga enye
30.10.2016 3.11.2016 BeranisteUkuphawula kwinqaku
Xa eli nqaku lifundwa ngumntu ovela kwi-Skliko Andiyithandi le nqaku ukuba ithathwe ngokwahlukileyo kunokuba lingaboni kwaye libhekwe njengento ngaphandle kokumemeza okungenacala. Ndinamava amahle kakhulu kuloluhlu. Ummeli wezentengiso osebenzele iminyaka ufezekileyo (nceda uMnu. Bartoš), inkxaso ye-Sklička iyamnandi yaye yenza oko akunako, ngokwenene ...
29.10.2016 31.10.2016 Beraniste3 izimvo
Kutheni ndiqalise ukucinga malunga nabasebenzi kwi-eshopu caskrmeni.cz sisebenzisa zonke iindlela zokuthengisa. Ezinye zazo azifanelekanga nantoni na, ezinye ziphantse iipuni kwaye ezinye zibiza. Phakathi kweendlela ezibiza kakhulu eziye zasinceda sithole abathengi be-5 kakade, i-PPC. Ngelishwa, ixabiso lokuchitshiyelwa alixhomekekanga kwaye liya kuba nzima. Ngaphandle ...
23.10.2016 23.10.2016 BeranisteUkuphawula kwinqaku
Ngomntakwethu, sasixabana kakhulu, sitshitshisa, sasitshitshisa phakathi kwethu njengoko kwakuphakathi kwabazalwana. Kwaye ngoko indlela yokwahlula isisombululo esisisombululo kwiingxabano zethu ezide. Ndiyisebenzise le ndlela kaninzi, kwaye kaninzi ndimmisele kubaqhelana naye - abafundi beekholeji abaye bamangaliswa ngokulula nokusebenza kwayo. Wonke umntu wafika ...